inogara ichiratidzwa pasamsung galaxy s8 vs lg g6
Kuru Nhau & Ongororo Nguva dzose Inoratidzwa pane iyo Samsung Galaxy S8 vs LG G6
Nguva dzose Inoratidzwa pane iyo Samsung Galaxy S8 vs LG G6
Nekudaro, kubvira gore rapfuura, LG neSamsung vanga vachipa chimwe chinhu chitsva pamafonifoni avo emagetsi - anogara achiratidzwa. Kunyangwe panorara foni yako, iyo inoratidzira inoratidza inogara iripo, isina kudzima-yakavhenekerwa widget pachiratidziri, ichikupa iwe yakakosha ruzivo, senge nguva, uye dzakarasikirwa nezaziso.
Pamwedzi gumi nembiri yapfuura, Samsung yakavaka pane yayo yekutanga pfungwa, ichiwedzera maficha, uye kugadzirisa nzira yaro Inogara iri pamabasa, nepo LG isina & apos; isina kuchinja zvakanyanya. Ngatitarisei misiyano mikuru pakati pezviviri!
Sammy & apos; s mafoni anozungunusa kuratidzwa kwe AMOLED, nepo LG & apos; s zvishandiso zvakagadzirwa neLCD pani. Nekudaro, nepo iyo Galaxy S8 ichigona kungovhenekera mapikiseli mashoma ayo ainoda, uye kusiya zvimwe zvacho zvabviswa, chiratidziro chiri paG6 chinoda backlight yayo kuti igare iripo. Nekudaro, kuitira kuunza bhatiri kushandiswa pasi, LG inodikanwa kuguta pasi kupenya kweiyo Yaro Inogara ficha.
PaG6, zvisinei, kambani yakawedzera kuwedzera kwekuwedzera. Nekudaro, kana iwe ukaona kuti yako foni & apos; s Nguva Dzose Dziri kuratidza idzo dzakaoma kuona, unogona kuzviisa izvo pamutengo wehupenyu hwebhatiri. Heano maapuro anotaridzika mafoni maviri achienzaniswa, neiyo G6 & apos; s kupenya kunosimudzwa kubva, zvadaro zvichienda mberi.
< Brigness Boost Off Brigness Wedzerai>
Pamafoni ese ari maviri, unogona kushandura maitiro ewadhi widget yauinayo pane Inogara Iri kuratidzwa. Nekudaro, iyo & apos; s yakasarudzika sarudzo pane iyo G6 - unogona kutora dijitari wachi, wachi yeanalogog, uye yakasainwa siginecha. Ndizvozvo & apos; ndizvozvo.
PaSamsung Samsung S8, iwe & apos; une sarudzo yedhijitari kana wachi yeanalogog, wachi yepasirese, karenda, kana wako wega pikicha. Ehe, iwe unogona kuve nemufananidzo wawakatora zvachose uripo pane Iyo Inogara Iri kuratidzwa.
Kuti iwedzere pamusoro, iwo maS8 & apos; s majeti anogona kunge aine diki wayaframe kumashure ine yakasarudzika color sarudzo. Nekudaro, maererano nemaonero uye kugadzirisa, Sammy & apos; s sarudzo iri nzira, kumberi.
Pese paunenge uine ziviso yakasarudzika - yakashaikwa kufona, mameseji ekutaura, email, chero chimwe chinhu - iwe uchaona diki icon pane iyo Inogara Iri kuratidza, inomiririra iyo app. Pane iyo LG G6, izvi zvinongova neruzivo - ma icon haasi kuita, iwe unofanirwa kumutsa foni yako uye tora chiziviso kubva ipapo.
Pane iyo Galaxy S8, unogona kunyatsoita zviito pane Iyo Inogara Inoratidzwa. Kubata kaviri wachi / khalendari widget kuchaburitsa midhiya kudzora, izvo zvinokutendera iwe kudzora mimhanzi yako yekutamba usina kuvhura foni. Kana iwe ukabaya kaviri icon yekuzivisa yeiyo chaiyo app, iyo foni ichaenda kumberi uye kuvhura iyo app (iwe uchafanirwa kushandisa iyo yeminwe scanner, iris scanner, kana PIN, kana foni yako yakavharwa, asi iwe unowana pfungwa ).
Galaxy S8 Nguva Dzose Pamifananidzo inogoneka
Iyo Inogara Iri pakuratidzira ichiri chinhu chine kupokana kunobatsira. Iyo & apos; s inongova yekudonhedza zvachose pane bhatiri rako, iro risinganyatso kupa kukosha kwakanyanya mukudzoka. Iwe unogona zvirokwazvo kuwana yakakwana yezano rakanaka pamusoro pedzakamirira ziviso dzauinadzo iwe paunoona yako yakawanda-mavara LED kubhenekera (zvinosuruvarisa, izvi zvakasiiwa kubva ku LG G6). Chokwadi, inoshandura foni yako kuita wachi yepatafura, asi zvinoshanda nesimba-zvakanyanya kumutsa foni yako kamwe chete mukati mechinguva kutarisa nguva, pane kuti irambe ichipenya nguva dzese.
Izvo zvakati, uye tichifungidzira kuti pane nguva apo Nguva Dzose iri kubatsira, isu & apos; isu toti Samsung yakaita basa rakakura mukusimudzira kuita uye kugadzirisa kwechimiro pane ayo mafoni. Shanduro yeLG & apos; yeAll On ichiri yakanamatira mukutanga kwa2016 uye inonzwa yakasungwa-on uye yakanganikwa.
sprint vs verizon kufukidza 2017
bvisa zvakapetwa kubva pane zvinyorwa Java
Magamba eSkyrim kuwedzera kweVakuru Mipumburu: Ngano dzinoenda kurarama pane Android / iOS
AT & T Nhema Chishanu madhiri ave kurarama, tora mahara iPhone 7 neDirecTV chirongwa
Dema & Muchena (panda) Google Pixel 2 XL yadzoka mudura
Nyaya isingazivikanwe inodzivirira varidzi veSamsung Galaxy S10 kushandisa foni yavo
Meseji muIOS 14 inowana kutaurwa mumapoka ekukurukurirana, akapihwa hurukuro
Apple iPhone 6s Plus vs LG V10: kukurumidza bofu kamera kuenzanisa
Maitiro ekudzima ega eApple maapplication kubva pakugamuchira otomatiki zvigadziriso (hapana mudzi unodiwa!)
Yese nyowani TracFone uye Straight Talk mafoni kuWalmart, mutengo kubva kuLG Stylo 5 kusvika kuCherechedzo 10